पोस्टर च्यातेर आन्दोलन तुहिँदैन – Rajdhani Daily
पोस्टर च्यातेर आन्दोलन तुहिँदैन
कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको साढे चार महिना बित्दासमेत प्रहरी अभियुक्तनजिक पुग्न सकेको छैन । हत्याको अनुसन्धानका लागि बनाएको विभिन्न छानबिन समितिले बलात्कार र हत्याको प्रमाण मेटाउन प्रहरी स्वयं सहभागी भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै सिंगो प्रहरी संगठनकै प्रतिष्ठामा आँच आएको छ । सरकारमा रहेका केही व्यक्तिहरूले निर्मला पन्त हत्याका विषयमा बेलामौकामा उत्तेजित अभिव्यक्ति दिँदा हत्यामा संलग्नलाई सरकार आफैंले संरक्षण गरेको त हैन ? प्रश्न पनि उठेको छ । पछिल्लो समय केही युवाहरूले निर्मलाको न्यायका लागि दबाब दिने उद्देश्यले ‘सरकार भेटियो, न्याय भेटिएन’ लेखिएको पोस्टर टाँस्न थालेपछि निर्मलालाई न्याय देऊ भन्नेहरूको आवाज थप चर्को हुन पुगेको छ ।
निर्मला पन्तको तस्बिरसहितको पोस्टर काठमाडौं, पोखरा, दाङलगायतका सहरमा युवाहरू स्वतःस्फूर्त टाँसेका छन् । लामा तथा छोटा दूरीका सवारीसाधनले स्वतःस्फूर्त रूपमा पोस्टर टाँसेर हिँडेका छन् भने सामाजिक सञ्जालमा निर्मलाका लागि न्याय माग्नेहरूको सञ्जाल व्यापक हुँदै गएको छ । समाज स्वतःस्फूर्त रूपमा निर्मलाको न्यायको निम्ति उद्धेलित भइरहँदा प्रहरी प्रशासन भने निर्मलालाई न्यायको अपिल गरिएको पोस्टर च्यात्नमै व्यस्त छ । प्रहरीले पोस्टर च्यातेको घटनाले निर्मलाका लागि न्याय माग्नेहरूलाई कमजोर बनाएको छैन तर यही कारण प्रहरीप्रतिको विश्वसनीयता थप गुम्ने क्रममा छ । बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा प्रमाण मेटाएको भन्दै सरकारले एसपी र इन्सपेक्टरलाई बर्खास्त गरिसकेको अवस्थामा तत्कालका लागि प्रहरीले गौरव गर्ने अवस्था छैन । एकाध प्रहरीले गल्ती गर्दा सिंगो संगठनमै दाग लाग्छ । प्रमाण मेटाउन प्रहरीनै संलग्न भएको पुष्टि भएको अवस्थामा पोस्टर च्यात्न पनि प्रहरीनै संलग्न हुनुले हरेक नागरिकलाई गम्भीर बनाएको छ ।
एकछिनलाई मानौं, प्रहरी आफैंले निर्मलालाई न्याय मागिएको पोस्टर च्यातेको हैन । कतिपय प्रहरीले भनेका पनि छन् ‘हामीले माथिको आदेश पालना गरेका हौं ?’ माथिको भनेर थप प्रश्न गरिरहनु जरुरी छैन । प्रहरीलाई आदेश दिने हैसियत सरकारबाहेक अरूले राख्दैन । यदि सरकार स्वयंले न्यायको अपिल गरिएको पोस्टर च्यात्ने उर्दी जारी गर्छ भने नेत्र विक्रम नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका प्रवक्ता प्रकाण्डले भनेको किन विश्वास नगर्ने ? उनले शक्ति प्रदर्शनको क्रममा भनेका थिए ‘निर्मलाको हत्या सरकारमा बस्नेहरूको छोराहरूबाटै भएको हो ।’ सरकारमा बस्नेहरूले सोच्न जरुरी छ । निर्मलालाई न्याय माग्दै टाँसिएको पोस्टर च्यात्दैमा निर्मला हत्या प्रकरणलाई थामथुम बनाउन सकिँदैन । निर्मला हत्या प्रकरण सरकारका लागि यति पेचिलो मुद्दा बनिसकेको छ । अभियुक्तलाई कारबाहीको दायरामा नल्याई सुखै छैन । चाहे जतिसुकै पहुचवाला व्यक्ति किन नहोस् ।
Tags: पोस्टर च्यातेर आन्दोलन तुहिँदैन